नारायणगढमा 'भैरव' हेरेपछि दर्शकले के भने ? स्थलगत रिपोर्ट । – Namaste Filmy
नारायणगढमा 'भैरव' हेरेपछि दर्शकले के भने ? स्थलगत रिपोर्ट ।
ज्ञानेन्द्र तमाङ, नारायणगढ ।
मिति : भाद्र ११ गते शुक्रबार
समय : अपरान्ह ३ बजे ।
स्थान : इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिर, नारायणगढ ।
चलचित्र ‘भैरव’ कस्तो लाग्यो ?
रजनी थापा (बिद्यार्थी): फिल्म राम्रो, साउथ मुभि हेरेजस्तो लाग्यो । साउथमा भन्दा केहि कमि छैन । एकदम रमाइलो लाग्यो ।
रबि अधिकारी (चलचित्र पत्रकार, मोडल): फिल्म हेर्दा बोर लाग्दैन । निखिलले दर्शक बोर नहुने फर्मुला फिल्ममा प्रयोग गरेको छ । तर कथामा कमि कमजोरी पनि छन, मैले चै योभन्दा पनि राम्रो अपेक्षा गरेको थिए ।
बिनोद लामा (रिक्सा चालक): निखिलको फिल्म चलेको छ भनेर धेरै बर्षपछि फिल्म हेर्न आको । मलाई एकदमै मन पर्यो । पहिले पहिलेको निखिलभन्दा अहिले झन खतरा भएको रैछ ।
बिनिता शर्मा (ब्युटिसियन): म नेपाली फिल्म खासै हेर्दिनथे । भैरवको चर्चा र युटुबमा ट्रेलर हेर्दा हेर्न मन लागेर आको । मलाई चित्त बुझ्यो । साथीहरुले पनि मन पराए ।
बिष्णु श्रेष्ठ (ब्यापारी): मज्जा आयो फिल्म हेर्दा । तर तराईतिरको भाषा बोलेको ठाउमा नेपाली सबटाइटल हालेको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । जे होस फिल्म चै दामी रैछ ।
ऋतुराज बिक (बिद्यार्थी): कोहिनुर पछि को राम्रो फिल्म लाग्यो । यस्तै फिल्म बन्यो भने नेपाली फिल्मको रेगुलर दर्शक बन्छु । एकदमै राम्रो लाग्यो ।
यी प्रतिक्रिया शुक्रबार ‘भैरव’को पहिलो शो हेरे निस्किएका दर्शकहरुले दिएका हुन ।
तराई जिल्लाहरुमा रिलिज हुन नसकेपनि राजधानी सहित पोखरा, नारायणगढ, हेटौडा लगायतका ठुला शहरहरुमा निखिल उप्रेतिको कमब्याक फिल्म ‘भैरव’ रिलिज भएको थियो । राजधानीका हलहरुमा शुक्रबार बिहानको शो नै हाउसफुल भएको र दर्शक ओभरफ्लो भएको रिपोर्टहरु आइसकेका थिए ।
नारायणगढको लागि भने पहिलो शो थियो शुक्रबार १२-३ को शो । मध्यान्ह १२ नबज्दै नमस्तेफिल्मी नारयणगढको मुटुमा रहेको इन्द्रदेव हलमा पुगिसकेको थिए । सयौ दर्शक हलको सीटमा पुगिसकेका थिए भने सयौ बाहिर लाइनबद्ध थिए । त्यही भीडका बीच नमस्तेफिल्मी पनि हलभित्रको एक सीट ओगटन पुगे ।
हलभित्रको सीटहरु खाली थिएनन् । दर्शक हरेक बर्गका थिए । युवा युवतिसहित अधवैसेहरु अलि धेरै । उमेर ढल्केका बृद्धबृद्धाहरुको पनि उपस्थिति बाक्लै थियो । करिब सवा १२ बजेतिर फिल्म सुरु भएसँगै हल ताली र सिटीले गुञ्जायमान भइरहेका थिए । पर्दामा निखिल उप्रेतिको अनुहार देख्नेबितिकै दर्शकमा उत्साह र जोस आउथ्यो ।
दर्जनौपटक दर्शकले सिटी बजाउने जोस निकाल्यो । फिल्ममा एक भिलेन राँगो चढेर दौडिएको दृश्यमा दर्शक उठेरै जोस र उत्साह देखाउनसमेत पछि परेनन् । यिनै होहल्ला र उत्साहका बीच करिब ३ बजे फिल्म सकियो । आन्तिमसम्म पनि दर्शकको ताली भैरवले पाइरह्यो ।
हल सञ्चालक मुक्तिलाल पियाले फिल्म हेर्ने दर्शकको उत्साह देख्दा भैरवले नेपाली फिल्ममा परिवर्तन ल्याएजस्तै लागेको बताए ।
भैरव निखिल उप्रेतिको डेब्यु निर्देशन हो । केहि बर्ष नेपाली फिल्मबाट टाढिएका उनी फिल्मको निर्देशनसहित कमब्याक भएका हुन । उनीसँगै मुरलीधर, अनु शाह, नागेन्द्र रिजाल, रविन सेन, जय किशन बस्नेत लगायतको फिल्ममा अभिनय रहेको छ । रतन दारुवाल र जोअन दारुवाल फिल्मका निर्माताहरु हुन ।
पुजनाको हल्का-हल्का सेक्सी भिडियो हेर्नुहोश
सगुन शाहीले किन सनम कठायतलाई 'तारे भिरको बिचारमा' छोडिन हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )